उद्योग उपभाेक्ता अन्तर्वार्ता
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ३ चैत
कोरोनाका कारण अहिले विश्‍व अर्थतन्त्र सुस्त हुन थालेको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)ले सन् २००९ पछिको खराब स्थिति अहिले ब्यहोर्नुपरेको जनाएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएयता विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । ओईसीडीको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.४ प्रतिशत मात्र रहनेछ ।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ठूला देशहरूले राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । यथास्थितिमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको संख्या नेपालमा नदेखिए पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । यसलाई सरकार र निजीक्षेत्रले स्वीकारेका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले भविष्यको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर राहतको प्याकेज माग गरेका छन् ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिले आइतबार पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्याकेज घोषणाको माग गरेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार :
राहत प्याकेजकाे माग गरिरहनुभएको छ, कस्तो प्याकेज हो तपाईंहरूले खोजेको ?
अहिले विश्‍वभर कोरोना भाइरसका कारण त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा सबै सचेत हुन आवश्‍यक छ ।
भाग्यवश हाम्रो मुलुकमा सङ्क्रमण फैलिएको छैन । यसबाट बच्नका लागि के गर्न सकिन्छ । अन्य क्षति कम गर्न गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल चाहेका हौँ ।
मुख्यत: अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रका होटल, एयरलाइन्स, ट्रेकिङमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको अवस्था छ । एयरलाइन्समा हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी फ्लाइटहरू ग्राउन्डेड भइरहेका छन् । होटलको अकुपेन्सी २० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ ।
त्यो पनि बुकिङ क्यान्सिल भइरहेका छन् । यति मात्र नभएर अन्य उद्योगमा पनि प्रभाव परेकाे अवस्था छ । आयात-निर्यातमा नाकाबन्दीको जस्तो समस्या आएको देखिएको छ । यो अवस्थामा सरकारले सञ्चिति बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले ६ महिनासम्मका लागि सामग्री सञ्चित भएको देखियो । तर, यो सङ्क्रमण बढेर गयो भने असर नराम्रो पर्न सक्छ । अहिले केही असर देखिएको पनि छ । यो असर कम गर्नका लागि ३ महिने, ६ महिने, ९ महिने अवधिमा योयो गर्ने भनेर त्रैमासिक रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
विशेष गरी बैंक ब्याजका कुरा भए । बैंककाे किस्ता तिर्ने सवालकाे कुरा भयो । ३-३ महिनाको ब्याज तिर्ने सवाल पनि छन् । यी विषयमा सरकारले विशेष प्याकेज लिएर सहुलियत दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रको माग हो । ब्याजदरमा पनि सहुलियत हुनुपर्‍यो, किस्ता तिर्ने सवालमा अलिकति पर सार्न जरुरी छ‍ ।
यी त तपाई‌ंहरूका कुरा भए, सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनुभयो त ?
अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटनलगायत मन्त्रालयका बीच संयुक्त बैठक गरेर केही न केही प्याकेज ल्याउँछौँ भन्ने धारणा उहाँहरूले राख्नुभएको छ । तर, सरकार हतारिएको छैन । हामीले अर्को मिटिङ बोलाएर पुन: राय लिने र सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने कामको घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
तपाईंचाहिँ अलिक आत्तिनुभएको हो ?
अवस्था छर्लङ्ग ऐनाजस्तो देखिएको छ । अहिले अवस्था पनि त आत्तिनुपर्ने नै छ नि ? भोलि हुने कुरामा अहिले नै ध्यान दिनु परेन त ? सरकारले हामीले अर्को मिटिङ छिट्टै गर्न भनेका छौँ । २-३ दिनमा मिटिङ राख्न भनेका छौँ ।
समस्या परिसकेपछि गर्ने कुराभन्दा पनि पहिले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो । धेरै कुरा समस्या परेको छ । एयरलाइन्स ग्राउन्डेड भइरहेका छन् । होटल सुकिरहेका छन् । यो अवस्थामा हामी अब यो गर्ने भनेर पहिले ध्यान दिनुपर्‍यो ।
यहाँ त जे पर्‍यो, त्यही टर्छ भनेर अघि बढेको पनि देखिन्छ । कस्तो अवस्था आउँदा के गर्ने भनेर पहिले नै हाम्रो अभिभावक (सरकार)ले निर्णय लिनुपर्ने हो नि !
अनावश्‍यक लाभ खोजेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ! अर्थमन्त्री स्वयमले प्रभावितलाई मात्र लाभ दिने हो, अन्यले यस्तो लाभ लिन नखोजे हुन्छ भन्नुले कस्तो अर्थ लाग्छ ?
यो कुरा छर्लङ्ग गर्नुपर्छ सरकारले । अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यङ्ग्य गर्नुको अर्थ रहँदैन । व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दा निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्छ । लाभ त देश र देशवासीलाई नै हुने हो ।
अप्रभावित व्यवसायी म पनि प्रभावित हुँ भनेर जान सक्ने अवस्था नै छैन। यो लुकाएर गर्ने कुरा पनि होइन । कतिपय नबोले हुने कुरा पनि बोलिदिँदा समस्या हुन्छ ।
केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्रीले हामी आइसोलेसनमा राख्न सक्दैनौँ भन्ने कुराले कस्तो अर्थ लाग्यो, त्यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीहरूले ध्यान दिन भने जरुरी छ । मनमा जे आउँछ, त्यही बोलिदिँदा समस्या भएको छ । त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि, अहिले अर्थ मन्त्रालयले छलफल बढाएको छ । केही गर्छौं भनेको छ । यो सकारात्मक छ तर समयमै होस् भन्ने हामी चाहन्छाैँ ।
तपाईं हामीले जिम्मेवार सरकार त चाहेका छौँ, सरकार र आमउपभोक्ताले जिम्मेवार निजीक्षेत्र पनि त चाहेको छ । मूल्य बढ्न सक्ने शंकामा पेट्रोलपम्प नखोल्ने । एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने र बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम पनि त निजीक्षेत्रबाट भएको छ नि होइन ?
हामी आफैँले बारम्बार भनिरहेका छौँ । एउटा वस्तु त हामी उत्पादन गरौँला, सयौँ वस्तुका हामी पनि उपभोक्ता हौँ । सबै जिम्मेवार बन्न आवश्‍यक छ तर सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ निजीक्षेत्रभित्रका केही समस्या हामीले देखाएका छौँ होला ।
सरकारले कमजोर समयमा समन्वय नगर्ने, परामर्श नगर्ने देखिएको छ । एउटै विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रको समान धारणा नहुन सक्छ तर छलफल गर्दा यस्तो हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नि !
यस्तो दु:खको समयमा अभाव सिर्जना गर्ने, महँगो मूल्य लिने विषयमा हाम्रो सहमति रहन सक्दैन । हामीले यस्ता व्यापारीको संरक्षण गर्न जरुरी देख्दैनौँ ।
सबै व्यवसायी राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन । एमआरपी देखिएन कि बढी मूल्य लिने पनि छन् । साझा उद्देश्‍यले राज्यलाई पनि लाभ दिने व्यवसायीले पनि दायराभित्र बसेर नाफा लिने हो । तर, धमिलो पानीमा माछा मार्नेका पक्षमा हामी छैनौँ । त्यस्तो व्यवसायीको कारबाहीमा हाम्रो सहयोग हुन्छ, अवरोध रहँदैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३, २०७६, ०२:४५:००